ट्रम्पसँग वार्तामा रहेका किम जोङले आफ्नै प्राइभेट ट्वाइलेट लगेको खुलासा ! | KTM Khabar
ट्रम्पसँग वार्तामा रहेका किम जोङले आफ्नै प्राइभेट ट्वाइलेट लगेको खुलासा !
२०७५ जेष्ठ २९ गते १५:५३ मा प्रकाशित
अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली शाशक किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा आज बिहान भेट वार्ता भएको थियो । विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाका राष्ट्रपति र त्यही अमेरिकालाई आणविक आक्रमणको धम्की दिने उनका लागि सिंगापुरमा सुरक्षा व्यवस्था काडा बनाइएको छ ।
उनले भने सिंगापुर आउँदा आफ्ना लागि आफ्नै पोर्टेवल ट्वाइलेट ल्याएका छन् । त्यति मात्र होइन उनले आफ्ना लागि आवश्यक खाने कुरा समेत आफै लगोका छन् । त्यस्तै किमले बुलेट प्रुफ लिमोजिन समेत सिंगापुर लगेका छन् । उत्तर कोरियामा भने आफ्ना शासको गोपनीयता बाहीरिएको बारेमा चिन्ता भइरहेको राजनीतिक वृतमा चर्चा छ ।
उनले किन आफ्ना लागि पोर्टेवल ट्वाइलेट लगोका हुन् भन्ने विषयमा धेरै लाई चासो हुन सक्छ । किने कि उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबारे अरु कसैले जानकारी नपाओस भन्ने चाहन्छन् ।
उन सिंगापुर जाँदा प्योङयाङ बाट सांघाइ र सांघाइबाट सिंगापुर गएका हुन् जहाँ जान मात्र ६ घण्टा लाग्छ । तर उनले बेइजिङको रुट प्रयोग गरेका थिए । किम की बहीनि किम यो–जोङले उनका दाइलाई किमको निजी विमान सोभियत–एरामा सिंगापुन पु¥याएकी थिइन ।